Ninki Mad-habta SHIICADA Faafinayay oo la Xukumay | Maalmahanews
Ninki Mad-habta SHIICADA Faafinayay oo la Xukumay
Maxkamada Gobolka Maroodijeex ayaa maanta xukun hal sano ah , ganaax iyo mustaafurin ku riday nin lagu eedeeyay inuu magaalada Hargeysa ka faafinayay mad-habta shiicada.
Ninkan oo u dhashey dalka Pakistan islamarkaana waddanka u joogay arimo ganacssi ayaa laba todobaad ka hor waxaa magaalada Hargeysa ka qabtay ciidanka Socdaalka Somaliland iyagoo ninkani ku eedeeyay inuu fidinayay mad-habta shiicada.
Maxkamada gobolka Maroodijeex oo maalmahan ay ka socotay dacwada ninkan shiicada ah ayaa saaka ku xukuntay xadhig hal sano ah, saddex milyan oo ganaaxa iyo in dalka laga mustaafuriyo marka uu dhameyso xadhiga.
Qareenada maxkamada ka wadday dacwada ninkan shiicada ah ayaa saluug ka muujiyay xukunka ay maxkamadu ku riday, iyagoo sheegay inay xukunka maxkamada rafcaan ka qaadanayaan maadaama aan ninkan lagu xukumin ganaax adag.
Geesta kale guddoomiyaha guddida wanaagfarista iyo xumaanta reebista ayaa shacabta uga digay khatar ay leedahay mad-habta shiicada isagoo bulshadana ugu baaqay inay soo qabtaan qofka ay uga shakiyaan inuu diinta khalkhal ku wado.